Izitya - Ukupheka iiresiphi | Ukupheka iiresiphi (iphepha 7)
Isaladi ebandayo yespaghetti, iresiphi esempilweni kweli hlobo
Kule nqaku sikunika umbono wokuqalisa ukutya kweli hlobo kunye nale saladi ibandayo yespaghetti eneqanda elibilisiweyo, ityhuna kunye neham.
I-Tarte Tatin eneeperile kunye nesinamon, i-dessert emnandi
I-Tarte tatin iklasikhi yengxelo yaseFrance. Sikubonisa amanyathelo okwenza ipere kunye nesinamon tatin ikeyiki
Iimpawu ezenziwe ngabantu, ezilungele isidlo sangokuhlwa sabantwana
Kule nqaku sikufundisa indlela yokwenza ukutya okuthandwa ngabantwana, izinto ezithandwayo, ngeli xesha usempilweni, ulibale malunga nokutya okuthosiweyo kunye nokutya okungenamsoco.
Inkukhu yafaka i-aubergines kwi-mushroom sauce
Kweli nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani i-aubergines emnandi efakwe nenkukhu kwi-mushroom sauce, uya kumangaliswa yindlela ezimnandi ngayo.
I-Strawberry kunye ne-banana smoothie, ukutya okuhlaziyayo kunye okunesondlo
Sikubonisa indlela yokwenza i-strawberry kunye ne-banana smoothie elula, isiselo esihlaziyayo nesinempilo, esilungele amashwamshwam abantwana.
Iinkukhu skewers ngemifuno, ekhethekileyo kwisidlo sangokuhlwa sothando
Kule nqaku sikunika umbono olungileyo wesidlo sothando kunye ne-skewer yenkukhu ngepelepele, itswele kunye neetumato zekheris.
Ipayisi irayisi, idizethi entsha eshushu ngobushushu bezi ntsuku
Kule nqaku sivelisa i-dessert emnandi eyayenziwe ngaphambili, irayisi pudding, iswidi esitsha kakhulu kwezi ntsuku zobushushu obukhulu.
Iitapile ezibhakiweyo ezinxibe kunye nesoseji yesoseji
Kule nqaku sikunika umbono okhawulezayo wokwenza iresiphi ngeetapile. Uyayithanda le recipe yeetapile ezigcadiweyo kwaye akuyi kukuthatha ixesha elide ukuyenza.
Iresiphi yeRatatouille, ukuqala iveki ngemifuno elungileyo
Kule nqaku sinika iresiphi elungileyo kakhulu ye-ratatouille, emnandi ukuqala ngalo Mvulo.
I-puree yethanga kunye necroutons, yosapho lonke
Ithanga le-puree yikhalori yesiko ephantsi, isitya sokucoca. Bhangqa kunye necroutons ezinqabileyo kwaye wonwabe nosapho lonke.
I-chocolate ye-flan kunye ne-cookies kaMaria, i-dessert ekhawulezayo
Sikubonisa indlela yokwenza itshokholethi kunye neebhiskithi zeflan, idizethi eluncedo kakhulu oya kuyilungisa kwimizuzu eli-15.
I-pizza pan, enye iresiphi yokusetyenziswa
Kweli nqaku sikubonisa iipizza ezimnandi zeepani ezenziwe ngesonka esidala kunye nentsalela yezinye izitya, indlela yokusebenzisa yonke into esekhitshini.
Isobho i-la olla, iresiphi eyenziwe ngecephe eyenziwe ngumakhulu-makhulu
Kule nqaku sikubonisa iresiphi yeentsuku zakudala, isuphu embizeni, apho umakhulu-makhulu wayesebenzisa isonka esidala kunye nomhluzi osembizeni.
I-Burger eneSonka esimnandi esimnandi
Kule nqaku sikufundisa ukuba ungazenza njani iihambhega ngenye indlela enencindi, iihambhega ezifakwe itshizi.
I-Cream muffins, ithenda kunye nobumdaka kakhulu
I-muffin ze-Cream zizinto zakudala kwishishini lephephandaba, ukuluma okungenakuphikiswa kwisidlo sakusasa okanye ukutya okulula.
Amaqanda agxunyekwe nge-paprika
Sikubonisa indlela yokwenza amaqanda amnandi agqitywe iiproni. Iresiphi elula kwaye emnandi kakhulu yokuthinta ukukhanya kwepaprika.
Isuphu yerayisi ene-clams, iresiphi yesiko evela kumama nakumakhulu
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi emnandi yesuphu yelayisi kunye neeflami ezinje ngomama nogogo.
Iitapile ezicujiweyo gratin, ehambelana ngokugqibeleleyo
Sikubonisa indlela yokwenza iitapile ezicoliweyo zegratin, ezilungele ukuhamba nenyama kunye neentlanzi kwaye zilungele abantwana
Inkukhu yegalikhi, isitya esihle esinevumba elimnandi
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi yenkukhu egalikhi. Ilungele izidlo ezithanda ukutya okunezipayisi.
Inkukhu, i-ham kunye ne-béchamel croquettes, ukuluma kwe-10
Kule nqaku sikubonisa indlela yokulungisa iinkukhu ezinencasa, iham kunye neebrochamel croquettes. Iresiphi enkulu yokonwabela isidlo sangokuhlwa.
Ngaba uyokulungiselela ukutya? Kuthiwani malunga nezinye i-muffins ezenziwe nge-almond? Ekuphekeni iiresiphi sixelela indlela yokulungiselela.
IMusaka yenyama kunye ne-zucchini, iresiphi yokonwaba kule mpelaveki
Kweli nqaku sikunika umbono wokonwabela inkalakahla kwezi ntsuku zokuba iiholide ziphelile kunye nale nyama kunye ne-zucchini musaka.
Iikuki zetshokholethi ezaphukileyo, isilingo sokwenyani
Sikubonisa inyathelo ngenyathelo ukwenza le recipe ilula yecookie cookies, iikuki eziphawuleka ngenkangeleko yazo eqhekekileyo
I-cheese eyenziwe ekhaya, uya kuyithanda
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza ukutya okumnandi okwenziwe ngeshizi yedessert. I-dessert emnandi ehambelana nayiphi na itafile.
Iipilisi zePiquillo ezifakwe i-bechamel, ipasika ekhethekileyo
Kule nqaku sikunika umbono wePasika, ezi pepper zepiquillo zigalelwe inyama nge-bechamel. Kakhulu!
Isonka saseArabhu silula kakhulu!
Ukwenza isonka saseArabhu kulula kwaye ngeresiphi esikulethela yona namhlanje uza kuyifumana ngokuqinisekileyo. Sukuphoswa yiyo!.
Iitshokholethi zetshokholethi kunye neenathi, ezikhethekileyo kulo Lwesihlanu kunye nokuqala kweeholide
Kweli nqaku sikubonisa indlela yokwenza iitshokholethi emnandi kunye ne-muffins yamandongomane. Ikhethekileyo ukubhiyozela iiholide zePasika.
Amaqanda aqhekeziweyo ngeetapile eziqhotsiweyo, zilungele xa kukho ugqirha
Kule nqaku sikubonisa isisombululo esihle kakhulu ngezo ntsuku xa singenaxesha lokupheka. Amaqanda amnandi aqhekeziweyo ngeetapile eziqhotsiweyo.
I-chicken livers kunye nelayisi, umthombo ococekileyo wensimbi
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi elula kakhulu egcwele izakhamzimba ezifana ne-iron. Ezinye izibindi zenkukhu ezimnandi sasemini.
Ikuki, ikhekhe ye-mocha kunye netshokholethi
Le iresiphi efanelekileyo yemihla yokuzalwa kunye neentlanganiso zosapho; i-easy-to-make, i-bake-bake, i-bake, i-cookie ehlanganiswe ngethokoleta kunye nekhekhe le-mocha!
Isaladi yeBud yesinaphi kunye nokunxiba ubusi
Ukutshintsha kunye nokungaziphindi kakhulu kubalulekile ekhitshini. Namhlanje sikubonisa isaladi eyahlukileyo, enesinxibo esimnandi se-moztaza kunye nobusi.
Iibhola zeetapile ezifakwe inyama kunye netshizi
Kule nqaku, sikubonisa indlela yokwenza iresiphi emnandi yabancinci, ezinye iibhotile zetapile ezifakwe inyama, baya kuzithanda.
I-spaghetti eneminquma emnyama, iresiphi elula kunye nexabiso eliphantsi
Iresiphi elula ihlala iphumelela ekhitshini, kodwa ukuba ayibizi kwaye ingoqobo, kungcono. Ungaphuthelwa yile recipe yespaghetti kunye neminquma.
Inyama ephekiweyo kunye nesosi yetumato
Sikubonisa indlela elula yokusebenzisa inyama ephekiweyo oyisebenzisayo ukulungiselela umhluzi. Inyama ephekiweyo ene-tomato sauce.
Ipasta enekhowa ye-basil
Ipasta enamakhowa e-basil, isitya esilula, esilula kwaye esimnandi ngokulinganayo.
Isosi yamakhowa, isitya esecaleni esimnandi
Sikubonisa indlela yokwenza isosi yamakhowa emnandi oza kuhamba ngayo nesosi yakho okanye izitya zenyama. Ilungile kwimizuzu engama-30.
Inkukhu yenkukhu ene-artichokes kunye nee-ertyisi
Sikubonisa indlela yokwenza isityu senkukhu esimnandi kunye nee-artichokes kunye nee-ertyisi, isityu esipheleleyo sokondla usapho lonke.
I-almond cookies, ukutya okulula kunye nokulula
Siza kukubonisa indlela yokwenza amakhekhe e-almond amnandi kwi-snack, alungile kwimizuzu ye-30!
Inkukhu ethosiweyo kwi-marinade, isonka soothixo
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi entle yenkukhu eqhotsiweyo kwisosi yeadobo. Ukutya okumnandi kuyo nayiphi na i-barbecue.
I-octopus yaseGalician, isidlo sangokuhlwa esili-10
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza isitya esiqhelekileyo saseGalician. Le recipe yeGalician octopus ithathwa njengenye yezona zitya ezilungileyo.
I-spaghetti enenkukhu, itshizi kunye nebhekoni, isebenzisa izithako
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi yespaghetti yenkukhu, itshizi kunye nebhekoni. Indlela yokusebenzisa izithako eziza kuphelelwa.
I-puree yemifuno kunye nesaladi exubekileyo, isidlo sangokuhlwa ezimbini
Kweli nqaku sikufundisa ukuba ungayenza njani i-puree yemifuno kunye nesaladi exubekileyo yesidlo sangokuhlwa ukwanelisa loo ndlala unayo ekupheleni kosuku.
Inyama yengulube ethambileyo itswele kunye nepepile eluhlaza
Sikubonisa indlela yokwenza i-tenderloin emnandi yengulube ene-anyanisi enesiqingatha kunye nekhasi eliluhlaza.
Iibhola zenyama yenkukhu, yosapho lonke kubandakanya nabantwana abancinci
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi ebalaseleyo yenkukhu yenyama yenkukhu. Iyacetyiswa kusapho lonke, ngakumbi abantwana.
Ipayi yeetapile ezicujiweyo kunye nenyama, ekhethekileyo kwisidlo sangokuhlwa sothando
Kweli nqaku sivelisa le khekhe leetapile kunye nenyama, ukubhiyozela isikhumbuzo okanye ukumangaliswa nje ngesidlo sangokuhlwa sothando.
Iigarlic prawns, itapa elula kakhulu yokwenza
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi elula kakhulu neyesiko, ezinye iiprinski ezimnandi nezinencasa yegalikhi, kwabo bathanda iziqholo.
Timbale yemifuno kunye neetapile ezicujiweyo kunye neqanda
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi elula, itimbale yemifuno kunye neetapile ezicujiweyo kunye neqanda.
I-Apple sinamon muffins
Sikubonisa iresiphi egqibeleleyo yokuqalisa ukubhaka, ezinye zi-apile kunye nesinamon ezimnandi ze-muffin. Kulula kwaye kuyakhawuleza!
I-Aubergines ene-cottage cheese, ukonwabela uSuku lweValentine
Sikubonisa iresiphi efanelekileyo ukumothusa olu Suku lweValentine, iiAubergines ezinecottage cheese. Isidlo esilula kunye nesheshayo kunye nomboniso olungileyo.
I-Cheesecake kunye ne-strawberry jam, i-dessert ekhethekileyo yoSuku lwe-Valentine
Kule nqaku siza kukufundisa indlela yokwenza ikhekhe leshizi kunye nejam yejubheri ukuze wenze iqabane lakho lithandane kwakhona ngoSuku lweValentine.
Inyama yeebhokhwe kwi-sauce yaseSpain
Sikubonisa indlela yokwenza iibhola zenyama kwisosi yaseSpain, isosi eya kuthi ikhonze nokukhapha ezinye inyama.
Iziqhamo ezishushu kunye nesaladi ye prawn
Iziqhamo ezishushu kunye nesaladi ye-prawn efanelekileyo kwisiganeko esikhethekileyo. Iinanapple kunye nemango zenza indibaniselwano enkulu yale saladi
Iipancakes ngeapile compote, idessert yomkhosi
Namhlanje sikubonisa indlela yokwenza iipancakes ezimnandi ngeapile compote, iresiphi yendabuko yaseGalician yokubhiyozela iCarnival.
I-risotto yamakhowa, iresiphi efanelekileyo yeValentine
Iresiphi elula yokutya kunye nenkampani elungileyo. Irisotto yokutyela, imnandi kwaye imnandi
Iindlebe zeCarnival, iresiphi yomkhosi ovela eGalicia
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iindlebe ezimnandi zeCarnival okanye i-Entroido Orellas, iresiphi eqhelekileyo evela eGalicia kwaye imnandi kakhulu kwinto etyiwayo.
Ukugcotywa kweebisi ezinobisi ezibhakiweyo, ezikhethekileyo kwiCarnival
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi emnandi yeCarnival. I-toast yobisi ebisiweyo ebilisiweyo, iresiphi elula kakhulu kwaye elula.
Iitapile eLa Riojana, isityu sendabuko
Sikubonisa indlela yokwenza i Patatas i-la Riojana, isityu sendabuko esityebe kakhulu kwincasa, egqibeleleyo ukulwa neyona mihla ibanda.
Amabele afakwe iham kunye netshizi, zilungele abantwana
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza amabele amnandi agqitywe ngeham kunye netshizi. Esi sidlo silunge kakhulu kubantwana bakho, baya kusithanda.
Iibhiskiti zesikwere zesonka, iamangile kunye netshokholethi
Sikubonisa iresiphi yesonka, iialmond kunye necookie cookies ekulungiseleleni onokuthi usebenzise isonka esidala. I-snack elula kwaye emnandi kakhulu.
Inyama yenyama kunye neetapile, umthombo wamandla
Kule nqaku, sikubonisa indlela yokwenza isityu esifanelekileyo senyama kunye neetapile, iresiphi enkulu ebonelela ngamandla amaninzi kunye nobushushu emzimbeni ngexesha lokubanda.
Ukuzenzela iqanda okuzenzela, uvuyo olumnandi ngalo Lwesihlanu
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi yesiqhelo yeqanda lendabuko. Le dessert isoloko ithandwa kakhulu ngabantwana.
Ityhuna kunye needombolo zeqanda, ezizodwa zabantwana
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani ityhuna yasekhaya kunye needombolo zala maqanda. Le recipe ilungile kakhulu ukukhokela abantwana ukuba batye imifuno.
I-spaghetti ene-chorizo ​​kunye nekhilimu, enye indlela yokupheka ipasta
Kule nqaku sikubonisa ispaghetti esimnandi kunye ne-chorizo ​​kunye nekhrim, iresiphi enkulu yespaghetti enencasa enkulu yaseSpain.
Iitapile ezihanjisiweyo kunye nebhekoni kunye neziqholo, isidlo sangokuhlwa kwimizuzu eli-15
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iresiphi yeetapile ezisikiweyo kunye nebhekoni kunye neziqholo. Ukutya okukhawulezayo kwimizuzu eli-10, pop! Uyakuyithanda.
Shrimp kunye coriander croquettes
I-Shrimp kunye ne-coriander croquettes, iresiphi etyebileyo yee-prawns kunye nevumba le-coriander eya kubamba izidlo. Imnandi kakhulu kwaye ilula.
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani inyama ye-lasagna Bolognese, eqhelekileyo e-Italiya kodwa ngochukumiso lwayo lwaseSpain.
Inkukhu kunye neeAlmonds, isidlo se-10
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza isidlo esikhulu senkukhu kunye neeamangile. Iresiphi elula, ngelixa imnandi. Ndiyakumema ukuba uzame.
Iresiphi yokwenza i-roscón de Reyes eyenziwe ngokwabo ngokwesiko. I-roscón eqhelekileyo eneziqhamo eziswiti kunye neeamangile ezisikiweyo. Iresiphi yobomi bonke.
Ikhekhe lesiponji lepesika (ngaphandle kweqanda)
Namhlanje ekuphekeni iiresiphi sikulethela iresiphi yekhekhe elimnandi lepesika elingenamaqanda!. Ke akufuneki ukuba uzikhathaze ngokutya okulula kwabantwana.
Isityu sikaMakhulu kunye necroutons
Apha sikufundisa ukuba ungayenza njani imbiza yomakhulu wakho, iresiphi elungileyo yesisu yokuphumla ngaphambi kwako nakuphi na ukutya okungaphezulu.
Imiqolo yemifuno kunye netshizi
Iresiphi yemiqolo yemifuno eneshizi, imnandi kwinto yokutya okanye ukukhapha ezinye izitya. Ungayikhapha kunye nesaladi okanye inkukhu etyiweyo
I-spaghetti ene-zucchini kunye ne-eggplant
Namhlanje ekuphekeni iiresiphi sikulethela isidlo esilula nesinencasa: Spaghetti esine-zucchini kunye ne-eggplant.
I-volcano yamakhowa eneqanda lezagwityi
Iresiphi yamakhowa, intaba-mlilo yamakhowa enezagwityi iqanda elilungele i-tapas okanye ukuhamba nesidlo neendwendwe
Isobho sentlanzi kunye neoodles, eyakhiwe kwakhona emva kweeholide
Kule nqaku sikufundisa indlela yokwenza isuphu efanelekileyo yentlanzi kangangeentsuku apho izidlo bezinzima kakhulu kwisisu sethu.
I-Turkey i-stew kunye nemifuno
Iresiphi yaseTurkey enemifuno, isitya esisempilweni kwaye esimnandi ukugcina ukutya. I-turkey stew iyanandi.
I-turkey enezinto, iresiphi yeKrisimesi
Iresiphi emiselweyo yeTurkey, isitya esiqhelekileyo seKrisimesi esine-prunes, iiapilkosi ezomisiweyo kunye neenathi zephayini. Iresiphi icaciswe ngokupheleleyo ngendlela elula kwaye inencasa
Isaladi yaseRussia, imnandi ngee tapas
Apha sikubonisa iresiphi eqhelekileyo phantse wonke umntu eyaziyo indlela yokwenza ngayo, isaladi emnandi yaseRussia, esinokuyitya nangaliphi na ixesha.
Iimbambo ezigcadiweyo, ukongeza ekubeni zimnandi, zisempilweni kakhulu, kuba zinongwe ngeoyile kunye ne-basil, kunye nokunye okunye.
Apha sikubonisa iresiphi yesaladi enemibala eyahlukeneyo yokuphulukana nezo kilos zongezelelekileyo sihlala sijonge le mihla yeKrisimesi kunye noEva woNyaka oMtsha
Ii-croquettes ezincinci zenkukhu, isidlo sangokuhlwa esilungele abantwana
Kule nqaku sikufundisa ukuba ungayisebenzisa njani nayiphi na inyama eseleyo ukwenza iicrocrytes ezikhethekileyo zenkukhu zabantwana.
Iimbotyi eziluhlaza kunye neqanda kunye nebhekoni, isidlo sangokuhlwa esisempilweni
Namhlanje sikubonisa iresiphi esempilweni yeembotyi eziluhlaza kunye nebhekoni kunye neqanda. Oku kubalulekile ekukhuleni kwabantwana, ke ... zama!
Iibhola zenyama kwisosi
I-Meatballs kwi-sauce isitya esipheleleyo kakhulu kwaye kulula ukusilungiselela, esilungele izidlo, ngakumbi xa kukho abantwana.
Izidlele ze-veal kwi-Porto sauce
Iresiphi elula kunye esempilweni ye-veal iresiphi ePorto isosi. Izidlele ze-veal ziyathandwa kuwo wonke umntu kwaye ziya kuphumelela kumsitho othile.
Ukutya kwaselwandle kweZarzuela
Iresiphi yentlanzi kunye nokutya kwaselwandle okuthandwa ngumntu wonke. Iresiphi elula yentlanzi igqibelele kwezi Krisimesi, usuku lokuzalwa kunye nexesha elikhethekileyo
I-tuna empanada, iresiphi emnandi yokusebenzisa imifuno
Kule nqaku sicebisa iresiphi yohlobo lwetyhuna, iresiphi emnandi yokusebenzisa imifuno. Ngumbono olungileyo, yizame!
Iimantecado zobugcisa, iidessert zeKrisimesi 3
Kweli nqaku sikubonisa ukuba ungazenza njani ii-ayisikhrim zamagcisa, idessert yeKrisimesi eqhelekileyo. Iresiphi efanelekileyo yesidlo esisilindeleyo ngoku.
Amaqanda aqhekezayo awaziwayo ziimbotyi okanye amakhowa, phakathi kwabanye. Namhlanje kwiIresiphi zokupheka sikuxelela ukuba ungayenza njani nge-zucchini.
Ikhekhe lokuzalwa ngekhilimu kunye nekhekhelethi
Apha siyakothusa ngale khekhe lokuzalwa, elinecryry cream kunye netshokholethi. Uluvo olulungileyo kubantwana kwaye, kutheni kungenjalo, hayi abantwana.
Isiqhamo sesaladi: iinanapple, imango, i-persimmon, i-strawberry, i-blueberry, okanye iziqhamo zonyaka ezilungele thina. Le recipe iya kubakholisa bonke abadli
Inyama yenkomo ejikelezayo enemifuno
Iresiphi ejikelezayo yemifuno kunye nemifuno, isempilweni kwaye isempilweni. Iresiphi ekhawulezayo nelula eya kuthi incede ekusetyenzisweni kwemifuno yosapho lonke
I-chocolate truffles ngamanyathelo amathathu
Iresiphi yokwenza iitshokholethi truffles ngamanyathelo amathathu alula. Sikubonisa indlela elula yokwenza i-truffles yetshokholethi, isidlo sangokuhlwa seendwendwe
Apha sikunika iresiphi eqhelekileyo yeKrisimesi: itshokholethi kunye ne-almond nougat eyenziwe sithi. Ndikholelwe uya kuyithanda!
I-tuna cannelloni, isidlo esimnandi se-pasta kuwo wonke umntu
Apha sikubonisa iresiphi emnandi ye-tuna cannelloni. Uluvo oluhle lokupheka ipasta ngendlela yokuba bonke abantu abadliwayo bamangaliswe.
Ikhekhe leyogathi, lokutya okungaqinisekiswanga
Apha sikubonisa indlela ekhawulezayo yokwenza ikhekhe leyogathi lokutya kunye nabahlobo ababuya ekhaya bengalindelanga. Kuyimpumelelo.
Ikhekhe lesiponji kwimizuzu emi-5
Ukwenza ikeyiki khange kube lula kangako: Sibeka zonke izithako ekomityini, kumxube kunye nemicrowave! Unobuganga ?.
Iisendwitshi ezigcweleyo, isidlo sangokuhlwa esihle kubahlobo
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iisandwich ezipheleleyo, ezilungele ukudibana nabahlobo.
Iibouillon ezenziwe ngabantu
Endaweni yokusebenzisa amacwecwe e-bouillon asele elungile, ucinga ntoni ukuba sizenzela ii-bouillon cubes zethu? Ilula, isempilweni kwaye yendalo.
Ukugcinwa okwenziwe ekhaya, kumnandi kakhulu kwaye kulula ukwenza
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza i-custard yasekhaya emnandi ngendlela elula kakhulu. Ndiyathemba niyazonwabela.
Iimbambo zemvana zobusi
Iimbambo zeMvana ezinobusi, iresiphi elula kunye neyokuqala enokuthi yothuse iindwendwe zakho.
I-cream khekhe, ukugcwalisa zonke iintlobo zeedessert
Iresiphi yokwenza i-pastry cream, eyona cream idumileyo yokwenza zonke iintlobo zeedessert. Fumanisa ukuba ungayenza njani i-khekhe le-khekhe ngeyona nyathelo kwaye ngendlela elula.
I-burgers yenkomo eyenziwe ekhaya kwi-sauce e-spicy
Apha sikufundisa ukuba ungazenza njani burger zasekhaya ezimnandi nezisempilweni ukuze ubaleke 'kukutya okukhawulezayo'.
Inkukhu yangaphandle kunye neCinnamon Saladitos
Umbono olungileyo wokutya: kulula kwaye akubizi. Iiplamu kunye nesinamon ziya kuyinika into engaqhelekanga eya kwenza ukuba amashwamshwam ethu angabinakuphikiswa.
I-Pink Lactonese okanye i-Pink Milk Sauce (ngaphandle kweqanda)
I-lactonese epinki, isosi epinki enobisi olumnandi olusebenza njengesixhobo sokuhambisa izitya ezininzi. Ukongeza, ngaphandle kweqanda, ulondolozo lulula
Ngokukhawuleza kodwa okumnandi spaghetti carbonara
Kule recipe siza kukufundisa indlela yokupheka i-spaghetti carbonara emnandi ngokulula nangokukhawuleza. Ndiyathemba ukuba uyabonwabela.
Iiprawn ezintsha eziphekiweyo
Indlela elula yokupheka ii-prawns ezintsha. Ukuba ufuna ii-prawns eziphekiweyo kwaye azikho kwimarike, nantsi ndicacisa indlela elula yokupheka
Iilenti ezinechorizo, umbono olungileyo wale nto ibandayo
Eli nqaku libonisa iresiphi eqhelekileyo yokugqithisa ingqele yasebusika, ezinye iilentile ezimnandi ezinechorizo. Zonwabele!.
Iintsana zeehagu zasendle
Iifama zehagu zasendle kwi-balsamic iviniga isosi kunye neepine nati kunye neerasentyisi
Izidlele zePuff pastry
Iintshontsho ezinamakhowa ezisongelwe nge-pastry
Ukupheka kwi-tajine kulula kakhulu kwaye kwamkela phantse nasiphi na isithako, ngokubanzi bahlala benenyama okanye intlanzi, kodwa kule ...
Iibhola zenyama ezidibeneyo
I-bacon kunye neeshizi ezifakwe inyama yenyama. Iresiphi yesonka esinyusiweyo esenziwe inyama yenyama egqibeleleyo yokutya okuphezulu kweprotein
I-zucchini efakwe kwi-Shrimp
I-Shrimp efakwe i-zucchini, iresiphi yokutya kwaselwandle efakwe zucchini. Uyakothusa wonke umntu onale zucchini isempilweni kwaye imnandi ngeeprawn.
Isobho seCastilian (isuphu yegalikhi)
Isobho seCastilian (isuphu yegalikhi), iresiphi eqhelekileyo evela emantla eCastilla y León esekwe kwizonka kunye negalikhi. Icebo kukuyimmer.
Kutshanje siye sabona iicookies zetshokholethi, zithambile kwaye zilungele ukuhamba neglasi yobisi. Abo ...
Iicookies zasekhaya zihlala ziphumelela kwaye, ukuba zenziwe ngetshokholethi, zingcono. Ezi cookies zithambile kwaye zityebile kodwa azinazo ...
Isuphu yeentlanzi engabizi
Isuphu yeentlanzi etyebileyo akufuneki ibize! Fumanisa ukuba ungayenza njani kuhlobo lwezoqoqosho.
Ikomityi yelamuni efriziweyo enesiseko se-caramel kunye ne-peanut
Inkukhu isaladi kunye nesosi epinki
Akukho nto ilunge kakhulu yokutya kakuhle kunesaladi elungileyo kunye nenkukhu kunye nemifuno, ukwenza ukutya kwethu ibe lelona qabane lilungileyo.
Umvundla kwisinanasi isosi
Ukuba uyayithanda inyama, akukho nto ilunge ngaphezu kokwenza le recipe ngesosi yeinanapple, kuba imnandi kwaye ilula.
I-watermelon jelly eneziqhamo eziqingqiweyo
Ijel watermelon eneziqhamo ezinqunqiweyo, idizethi elula eya kuthi incede abantwana batye iziqhamo ezininzi
Utamatisi skewers ngeqanda kunye neham
Sikubonisa indlela yokwenza i-skewers ezimnandi kunye nezithako ezilula ukuze uzilungiselele nangaliphi na ixesha.
Iphayinaphu, ibhanana kunye nesidudu sebhasikithi
Apha sikubonisa namhlanje i-dessert emnandi ukuze abantu abadala kunye nabantwana babe nesiqhamo ngeendlela ezahlukeneyo.
Isaladi yespinatshi, iresiphi efanelekileyo yokutya imifuno enomxholo ophezulu weevithamini kunye neepropathi ezininzi ezibalulekileyo ekutyeni kwethu
Isifuba esisikiweyo ngepelepele kunye netumato
Apha sikubonisa iswiti emnandi enemifuno kunye nenyama yabathandi bokutya okumnandi, ukuze ufunde izitya ezintsha.
Isaladi ye-Watercress eneentonga zolwandle kunye neeavokhado
Isaladi ye-watercress enesondlo kunye nefreshi kunye nee-avocado, izinti zolwandle kunye nama-apile, ehonjiswe ngobusi kunye ne-mustard
I-Banana kunye ne-ice cream yekhokhonathi
I-dessert efriziweyo enebhanana kunye neyogathi yekhokhonathi, iresiphi emnandi yebhanana kunye ne-ice cream yekhokhonathi yexesha elishushu. Iya kuba mnandi!
Imvana yobusi eneeplums
Imvana yobusi eneeplums, iresiphi yentsusa edibanisa incasa eswiti kunye netyuwa
Iitsheri, ivatala kunye neapricot smoothie
I-cherry elula kunye nehlaziyayo, i-watermelon kunye ne-apricot smoothie iresiphi. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela oku kutya okumnandi.
Iitapile, ityhuna kunye nekhukhamba tapa
Iresiphi etyebileyo nekhawulezayo yeetapile, ityhuna kunye nekhukhamba tapa. Makhe sibone inkqubo elula yokonwabela oku kutya okumnandi.
Iresiphi elula kunye etyebileyo yeefilikhi zaseTurkey ezine-béchamel gratin. Makhe sibone inyathelo elilula ngenyathelo lokonwabela ukutya okumnandi.
I-Churrasco kunye ne-pepper sauce
Iresiphi elula kunye etyebileyo ye-churrasco enesosi yepepile. Masibone inyathelo ngenyathelo lokonwabela ukutya okucoliweyo kunye nokulungiswa kwayo.
I-Scalding gratin, kulula ukuyilungisa kunye neresiphi etyebe kakhulu, ilungele xa unqwenela isidlo sangokuhlwa
Imifuno egutyiweyo enetyhuna kunye nesosi yesosi
Iresiphi elula kunye ekhawulezayo yemifuno etyiweyo kunye ne-tuna kunye nesosi yesosi. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela iresiphi.
Inkukhu enaninapple kunye nobusi isosi
inkukhu enepinapple emnandi nenencasa, isoya, ubusi kunye nesosi emhlophe yewayini
Isonka sebhanana esilungiselelwe ngomgubo wokubhaka, iresiphi etyebileyo eqhelekileyo yaseMelika, uya kubona ukuba kwenzeka njani
Isaladi kunye ne-melon kunye ne ham
Isaladi kunye ne-melon kunye ne-ham ebhedini yamahlumela eetesi kunye ne-pickles kunye neminquma emnyama.
Isaladi kunye artichokes kunye netshizi
Isaladi yeshlumelo esincinci ene-artichokes, itshizi, iitumato kunye neminquma emnyama
Ii croquettes ezizenzele ekhaya
Iresiphi elula kunye nesityebi yee-croquettes ezenziwe ekhaya. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ukutya okutyibilikayo.
I-biscuits (okanye i-sponge cake lollipops)
Iibhiskithi ziresiphi ehlala iphumelela phakathi kwabancinci, kwaye kulula kakhulu ukuyenza!
Isaladi ngeeshizi kunye nama-walnuts, iresiphi eyahlukileyo kodwa kulula kakhulu ukuyonwabela ehlotyeni
I-apile edibeneyo ye-chocolate
Itshokholethi edikiweyo yeapile, iresiphi elula yabantwana
Iresiphi elula yeemuffin zemon. Ezi muffins zilungile kwisidlo sakusasa okanye kwi-snack enekomityi yobisi okanye zisasazeka ngebhotolo
ICrostata enedemlar jam
Ikhekhe elibhakiweyo eligcwele ijam eyenziwe ekhaya.
Ikeyiki Mascarpone itshiswe amaqunube kwaye ugqunywe ijeli.
Iikeyiki ngekofu kunye neyogathi
Iresiphi elula yekhekhe kunye nekofu kunye neyogathi. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela iresiphi.
Iibhanana eziqhotsiweyo kunye nekhokhonathi
Isifudumezi sebhanana esishushu eshushu kunye nekhokhonathi egayiweyo, itshokholethi, cream okanye i-dulce de leche kunye nezithambisi ezahlukeneyo zomkhenkce.
Isaladi yenkukhu kunye nephayinaphu
I-lettuce isaladi kunye nesipinatshi kunye ne-arugula ihluma ngenkukhu, iinaninapple kunye nama-walnuts.
Ibhanana encinci yesiFrentshi
Iresiphi elula necebileyo yeebhanana ezincinci, kunye nesinamon. Masibone inyathelo ngenyathelo ukuze sikonwabele ukutya okutyiwa.
Ibhanana ethosiweyo ene caramel
Amalungiselelo kunye nencasa eswiti, banana othosiweyo nge caramel. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ukutya okutyibilikayo.
Utamatisi, itshizi kunye ne-basil crostinis
Isonka esityiwe ngeoyile, sifakwe iitumato, igalikhi, itshizi kunye nebasil eneminquma emnyama.
Imbaza kunye neetshiphusi
Iimbaza zeProvençal kwiwayini emhlophe zikhatshwa ziifries zaseFrance
Imifuno yeCrispy eneshizi yebhokhwe
Inhlama yezitena yeCrispy efakwe isipinatshi kunye netshizi yebhokhwe.
Iifilikhi ezisongelweyo, ezifakwe iham, itshizi kunye neminquma kwisosi ebomvu ebomvu.
Umsonto uzaliswe ngecryry cream, walnuts kunye neerasentyisi. Iresiphi ye-bagel egalelwe i-easter yokuba nesidlo sakusasa okanye isidlo esine-coffee elungileyo.
Utamatisi omtsha kunye netshizi tapa
Utamatisi omtsha kunye netshizi tapa, iresiphi elula yetumato kunye netshizi kuwo nawuphi na umsitho ongalindelekanga. Itapa ehlaziya kakhulu kwaye ilungele ihlobo
Isosi yetumato eyenziwe yasekhaya esebenza njengesihambisi kwi-French omelette, inyama yenyama, amaqanda abanjiweyo okanye ezinye iindlela ezininzi.
I-alfajores eyenzelwe ekhaya
IAlfajores yomgubo wengqolowa kunye ne-dulce de leche kunye nekhokhonathi.
Amakhowa afakwe iminenke ngebhotolo egarlic, iparsley kunye netswele.
I-Puff pastry kunye namaapulo
Iresiphi yamaapulo e-caramelized ngesiseko se-pastry.
Amabele enkukhu kunye nama-mushroom kwi-cream kunye ne-mustard sauce.
Izityalo zeqanda eMilanese
Iresiphi yeehabherini ezinesonka zokutya igratin ebhakaweyo okanye isandwich emnandi yemifuno.
Amabele ahlanjululwe kwiviniga yebhalsam kunye negalikhi
Iresiphi elula yesifuba esihlanjwe ngeviniga yebhalsam kunye negalikhi. Masibone inyathelo ngenyathelo lokonwabela ukutya okucoliweyo kunye nokulungiswa kwayo.
Iingxowa zekhaphetshi ezinamathele
Iresiphi elula yeengxowa zekhaphetshu ezifakiwe, masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ubumnandi.
Isaladi yekhukhamba kunye nekhukhamba enezinxibo ezi-3 onokukhetha kuzo
I-pasta ene-sauce ye-bechamel kunye namaqanda aqhekezayo
Ipasta enesosi ye-béchamel kunye namaqanda aqhekeziweyo, iresiphi enencasa yepasta eya kuthakazelelwa nakuphi na ukutya, ipasta ene-béchamel imnandi
Sirloin kunye neplums
Namhlanje ndicinge ngesidlo sangokuhlwa ezimbini. Siza kulungiselela i-sirloin ngeplums, endicinga ukuba iya kuba yimenyu ...
Inyama kunye nemifuno
Namhlanje siza kulungiselela i-skewers, isidlo esilula kakhulu esinee-skewering ezahlukahlukeneyo zokutya okusikwe kumacwecwe amancinci ...
Siza kulungiselela isosi yaseBolognese esinokuyisebenzisa xa sihamba nepasta, sigcwalisa i-cannelloni, ii-pizza, njl. Le recipe ayi ...
Isipinatshi esirhabaxa ngeqanda
Iresiphi elula yesipinatshi esuswe ngeqanda. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela oku kutya okumnandi.
Ukholifulawa kunye nesosi ye-bechamel
Namhlanje siza kulungisa ipleyiti yekholifulawa kunye neetapile. Icauliflower ngumfuno esityiwa kancinci nangona uyi ...
I-Strawberry smoothie, iresiphi elula ye-smoothie eneziqhamo zendalo. Abantwana bayazithanda ezi zokupheka apho bengaziboni iziqhamo kunye nabantu abadala nazo!
Namhlanje siza kulungisa iresiphi yefritters ephefumlelwe ziigun okanye iigunnes ezilungiselelwe ngumakhulu wam ngoLwesibini ...
I-Sobrasada skewers ngepelepele kunye nesoseji
Iresiphi elula ye-sobrasada skewers ngepelepele kunye nesoseji. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ukutya okutyibilikayo.
I-Banana puree ngamaqebengwana kunye nobisi
Iresiphi ye-Banana puree ngamaqebengwana kunye nobisi. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ukutya okutyibilikayo.
Inyama kwisosi yemifuno
Inyama kwisosi yemifuno, iresiphi yenyama ehamba kakuhle nerayisi encinci okanye iifriji zaseFrance
IPalmeritas De Hojaldre
Iichips ze-pastry chips zilungele i-snack. Njengoko kulula ukuzilungiselela, ungazenza nangaliphi na ixesha ...
Isipinatshi kunye netshizi quiche
I-Quiche efakwe isipinatshi, itshizi ye-Emmental kunye neqanda elibethwe nge-quark cheese kunye nekhilimu.
Indlebe yehagu ebethekileyo
Iresiphi yendlebe yehagu ebethiweyo. Elula kwaye emnandi, masibone inyathelo ngenyathelo ukuyonwabela.
Isaladi esisiseko, ukuhambelana okunempilo nasiphi na isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa. Le recipe yesaladi yinto efanelekileyo
I-Skewer yeSonka esisikiweyo kunye neYork kunye neCheese
Iresiphi elula yesonka esisikiweyo ngeyork kunye netshizi. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ukutya okutyibilikayo.
Isobho seCarrot ngesinti
Isobho seCarrot kunye neqanda eline-mint
UJijona Nougat ngokuNcitshiswa kweRatafia
I-nougat elula kwaye ekhawulezayo yejijona ngokuncitshiswa kweRatafia. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela le recipe ilula.
Ipepile egutyiweyo, uhombiso olufanelekileyo lwenyama okanye intlanzi. Unokuhamba nayo nerayisi okanye isaladi
Isiqhamo sesaladi ngejusi yeapile
Isiqhamo sesaladi ngejusi yeapile, isidlo esifanelekileyo. Iresiphi yesaladi yeziqhamo ineevithamini ezininzi kunye negalelo elinomdla
Ifilimu yenkukhu kunye ne-Sauce ye-Strawberry
Iresiphi elula yenkuku enesosi ye-sitrobheli. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ukulungiswa kunye nokunambitha.
Isosi yepepper (ye-pasta)
I-sauce enencasa kwaye engabizi kakhulu yepasta. Ngale recipe ye-pastry sauce uya kuphumelela ngaphandle kokuthandabuza etafileni
Ulwimi lweenkomo kunye neetapile kunye neblack Butifarra
Iresiphi elula esekwe kulwimi lwenkomo, iitapile kunye nesoseji emnyama. Masibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela ukutya okutyibilikayo.
Ukuhonjiswa kwe-pea yegalikhi, iresiphi eqhelekileyo ye-ertyisi, ukutya okumnandi kunye nokulula kuwo nawuphi na umcimbi
I-caramelized anyanisi isosi kunye neerinki
I-caramelized anyanisi isosi kunye neerinki zebhola yenyama, inyama, intlanzi, njl. Iresiphi enencasa yawo nawuphi na umsitho.
Inkuku ekuthiwa yi-Canarian Adobo
I-recipe elula yenkukhu ehlanjululwe nge-Canarian adobo. Makhe sibone inyathelo ngenyathelo ukonwabela oku kutya okumnandi, okusishiyela incasa ekhethekileyo.
Iwok yoLimo oluQekekileyo
I-curry wok yemifuno, iresiphi esempilweni yaseTshayina eneeproteni ezininzi kunye neevithamini. Ukuba uyayithanda imifuno al dente zama, uya kubona ukuba imnandi kangakanani
Imbotyi eluhlaza eyosiweyo
imbotyi eluhlaza eyosiweyo, iresiphi elula nesempilweni
Ukucoca umhluzi ngokuchasene nokugcinwa kolwelo
Indlela yokupheka umhluzi ngokuchasene nokugcinwa kolwelo
Iitapile kunye neNkomo Millefeuille
Iresiphi elula yeetapile millefeuille nge-veal. Inyathelo elilula kakhulu ngenyathelo apho siza kubona khona inkqubo yokuyiphuhlisa.
Siza kulungisa i-apple etyebileyo, masibone inyathelo nenyathelo ukonwabela idessert emnandi ngokwenene.
IiNoodle ezinemifuno, kulula ukuzenza, zikhawulezile kwaye zineziphumo ezilungileyo.
Ukulahla amadombolo (ehovini)
Imigubo yenyama egayiweyo eyenziwe kwi-oveni + kunye nohlobo lwemifuno
Iinyama zenyama yehagu ene Prawns kunye ne Scampi
Iresiphi yokulungiselela izidlele zenyama yengulube kunye ne-prawns kunye ne-scampi. Ilula ukuyilungisa kwaye imnandi kwinkalakahla. Ngaphandle kokuqhubela phambili, bon appetit.
Ungayithintela njani ipasta ekuncamatheni
Iqhinga elilula ukuze ipasta inganamatheli, uyayenza ipasta iyanamathela? Apha sikubonisa indlela yokuqinisekisa ukuba ipasta ayinamatheli
Amakhowa athunyelwe ngeNyama encinci
Iresiphi esetiweyo ngamakhowa kunye nenyama egayiweyo. Ukulungiselela okulula kwesiphumo esikhethekileyo. Masibone inyathelo ngenyathelo.
Isaladi yomnqatha waseArabhu
Isaladi yomnqatha waseMorocco, iresiphi yesiArabhu evela eMorocco. Ungayibeka njengokukhapha kuyo nayiphi na inyama okanye intlanzi kwaye isempilweni kakhulu
Iinyawo zehagu kunye ne prawns
Iresiphi etyebileyo yeenyawo zenyama yehagu ene-prawns, elula kwaye emnandi, siza kubona inyathelo ngenyathelo ukonwabela le recipe.
Carrot kunye zucchini cream
I-kroti kunye ne-zucchini cream, iresiphi elula yokulwa nengqele yasebusika
I-Kefta tagine, isitya sendabuko saseMoroccan, iresiphi yesiArabhu yala mazwe, ijongeka ngathi ziibhola zethu kwaye ilunge kakhulu
I-Sauced Zucchini kunye no-anyanisi, ii-Bugs kunye nokuthinta amayeza
Imifuno etyebileyo etyiweyo, ene-zucchini, itswele kunye neebugs, iresiphi efanelekileyo yabo bathanda imifuno, ngokuthinta imifuno. Masibone inyathelo ngenyathelo.
Imifuno eqatywe imifuno
ii-aubergines ezifakwe imifuno, iresiphi elula kakhulu kwaye emnandi yokutya okunempilo
I-braid emnandi kunye ne-brioches
i-braid emnandi kunye ne-brioches, iresiphi emnandi oya kuyithanda isidlo sakusasa, isidlo okanye naliphi na ixesha losuku. Ngejam encinci imnandi
Insalata di pasta al pomodoro fresh e basilico (isaladi yepasta kunye netumato kunye nebasil)
Insalata di pasta al pomodoro e basilico, isaladi yepasta kunye netumato kunye nebasil. Isaladi elula kakhulu kwaye entsha yase-Italiya kwezi ntsuku zishushu
Kunqabile ukuba ndipheke into emnandi kwaye andazi nje ukuba kwenzeka ntoni kum ngezi ndlela zokupheka. Nayiphi na iresiphi ...
Ikhaphetshu kunye nesaladi yomnqathe
Ihlobo liyanyamalala ngokuthe ngcembe kunye neeresiphi ezintsha, kodwa akukho nto isithintelayo ekuxineni uninzi ...
Inyama egayiweyo Omelette
Iresiphi ye-omelette yenyama egayiweyo. Ekhethekileyo kodwa emnandi, siza kubona inyathelo ngenyathelo ukuyenza.
I-Veal Burger enemifuno
Iresiphi elula yeebhega burger kunye nemifuno. Njengesiqhelo siza kubona inyathelo ngenyathelo lokubenza kwaye sikwazi ukonwabela oku kumnandi.
Amabele okubhaka enkukhu kunye neziqholo
Namhlanje siza kuzama ukunika ukubamba okukhethekileyo kwibele yenkukhu, ukwenza kube lula ukutya. Siyathemba ukuba iyasebenza, masibone inyathelo ngenyathelo.
Isonka esifakwe imifuno kunye nenyama egayiweyo
Namhlanje ndikuzisela isonka esimnandi esifakwe imifuno kunye nenyama egayiweyo eboniswe ngohlobo lwe-braid, ihlala iphumelela!
UQuince kunye noBacon Skewer
I-Bacon skewer iresiphi ene-quince, iswiti kunye netyuwa ngokuluma okufanayo. Ilula kwaye imnandi. Masizame ukuyicacisa.
Amaqanda afakwe itshizi entsha kunye neminquma
Namhlanje ndikuzisela isibheno esitsha kakhulu, esityebileyo nesibonisiweyo: Amaqanda afakwe itshizi kunye neminquma.
Inkukhu eneentlanzi kunye namaMushroom
Iresiphi yenkukhu ene-prawn kunye nama-mushroom. Elula kwaye imnandi, masibone inyathelo ngenyathelo.
I-Zucchini Skewers kunye neCheese
Iresiphi yee-skewers zucchini ezineeshizi, ezikhethekileyo kunye nencasa emnandi. Masibone inyathelo ngenyathelo.
Ijusi yendalo yepesika
Ngeentsuku ezishushu, incindi yendalo epholileyo inokuba luncedo kuthi ukusela amanzi kunye neziqhamo. Apha ndikushiya ijusi epholileyo kakhulu yepesika.
I-yogurt eyojiweyo kunye ne-Banana
I-yogurt e-crispy kunye neresiphi yebhanana, elula kwaye iyahlaziya ukuyenza, ilungele ihlobo.
Iikhukhamba ezixineneyo zaseSpain
Iresiphi yamakhukhamba eSpanish. Isityebi kwaye sisempilweni yindlela elungileyo yokulungiselela le mifuno, kuba iyathandeka xa isentsha ehlotyeni.
I-Petit pois a la française (okanye ii-peas zaseFrance)
Iiferesi zaseFrance, iresiphi yesiko evela eFrance enefoto yenyathelo ngenyathelo, kulula ukuyenza, iphantsi kweekhalori kwaye ayibizi.
Iipropathi zeApple (kunye nesmoothie ukuzisebenzisa)
Umthi we-apile ngomnye wemithi yeziqhamo etyalwa kakhulu kwihlabathi jikelele kunye neziqhamo zayo, iapile, enye ye ...
Utamatisi odibeneyo kunye ne-White Cheese
Utamatisi odibeneyo kunye neresiphi emhlophe. Ilula, isempilweni kwaye imnandi. Makhe siye ezantsi kwinkcazo yayo.
Ukholifulawa kunye neKhukhu kunye neMushroom Curry
Iresiphi yeCauliflower yenkukhu kunye ne-mushroom curry. Ilula kwaye isempilweni ukuyenza, siza kubona amanyathelo okonwabela oko.
Inyama yenkomo u-Ossobuco enamakhowa
Iresiphi yeOssobuco ye-veal enamakhowa, ilula kwaye imnandi, kunye neyokuqala. Siza kubona inyathelo ngenyathelo ukuyicacisa.
Imiqolo ye-Veal ene-Mushroom
Iresiphi yeeVeal Rolls ezigcwele amaMushroom, iresiphi elula kunye enomdla wokuyonwabela kunye nokumangalisa abanye.
Isaladi yeTatato enamaxesha
isaladi yetamati enongwe, enencasa, elula kunye neendlela zokupheka ezisempilweni kakhulu. Iresiphi yesaladi ibonelela ngeevithamini ezininzi ezibalulekileyo imihla ngemihla
Inzala yenyama yenkukhu enemifuno
Inzala yenyama yenkukhu enemifuno, isitya sendabuko saseMoroccan esimnandi. Ngale iresiphi yomzala awuyi kuzisola, ndiyakuqinisekisa ukuba uya kuphumelela
Inyama yenkomo, inkukhu kunye neetapile kwisosi yesosi
Iresiphi yenkomo, inkukhu kunye neetapile kwisosi yesosi. Elula kunye nokuthinta iAsia, isinika iintlobo ngeentlobo zeencasa.
Amaqanda aqhekezayo ngeSpinatshi kunye neqanda kunye negalikhi
Isipinashi siqhekeza amaqanda ngeqanda kunye negalikhi. Kulula ukuyenza kwaye ityebile. Kuba ikwafihla incasa yespinatshi.
Ialadi yeetapile zasehlotyeni
Isaladi yeetapile zasehlotyeni, emnandi kwaye ilula kakhulu, ekwabizwa ngokuba sisaladi yelizwe. Ukongeza ekubeni lula, ikwasisitya esinoqoqosho kakhulu
Iimbotyi eziluhlaza ezinamakhowa eBolognese
Iresiphi yeembotyi eziluhlaza kunye namakhowa eBolognese. Ilula kwaye isempilweni ukuyilungiselela, sisitya esipheleleyo.
I-Curry yenkukhu kunye nemifuno
I-curry yenkukhu yenkukhu kunye nemifuno. Ilula kwaye isempilweni. Ukongeza, iintlobo zisebenzisana nokutya.
Njengokuba ndihlala ndisitsho, umvundla yinyama esempilweni kwaye kulula ukuyilungisa masiyenze, masenze umvundla omnandi ngegalikhi.
Iphindwe kabini "S" Isuphu yeZucchini: Isempilweni kwaye ilula ngokulula!
Iikhrim yindlela entle yokutya imifuno. Ungaphuthelwa yile cream ye-zucchini, elula kwaye efanelekileyo yokutya.
Inyama yenkomo kunye neeMushroom kunye neePeas
Inyama yenkomo ebrukiweyo yeresiphi yesiko kwaye namhlanje siza kuyenza ngamakhowa kunye nee-ertyisi. Yindlela elula nangona amanye amanyathelo kunokuba nzima.
I-mushroom Tapa kunye neQuail Egg
Ukuqala kwilizwe lee tapas kuhlala kulungile. Kwaye namhlanje ndikuzisele iresiphi etyebileyo yokwenza itapa ekhethekileyo, ye-mushroom eneqanda lezagwityi.
Iipepper zixutywe ngemifuno kunye namaMushroom
Iresiphi esempilweni kwaye elula ukuyilungisa. Ezinye iipepper ezifakwe imifuno kunye nama-mushroom. Ubumnandi obumnandi obuza kusisindisa kwi-monotony.
Iimbotyi eziluhlaza ezi-Sautéed ezineGalikhi eNcinci kunye namaMushroom
Indlela eyahlukileyo yokutya imifuno, iimbotyi ezimnandi ezikhutshwe ngegalikhi kunye namakhowa. Ukuchukumisa okukhethekileyo kunye nokusempilweni. Ukulungiselela kulula kwaye akufuneki ngqwalaselo ininzi.
Ifreyimu yaseTurkey yaseRussia
Iresiphi yaseRussia turkey fillet yindlela elula yokulungiselela iburger yendabuko. Kwaye ngokuqinisekileyo usempilweni kunezo sele zilungisiwe.
I-Zucchini ekhutshiweyo enamakhowa
Pheka ngokukhawuleza kwaye usempilweni, asinakho ukubuza enye into. Kuthatha kuphela umnqweno kwaye okuseleyo kuya kuphuma kukodwa. Impilo ibalulekile ke ngoko masiyikhathalele.
Umvundla obhakiweyo kunye neziqholo
Iresiphi elula yomvundla owosiweyo ngeziqholo. Kukutya okucocekileyo okufanelekileyo kwizidlo kwaye kulula ukuba nexesha lonyaka ngeziqholo okanye ezinye izinto. I-crunchy imnandi.
ILa Mona de Pascua yindlela eqhelekileyo yeVeki eNgcwele kunye neentsuku zePasika kwiindawo ezininzi zaseSpain, ezinje ...
ICrosto: I-Puff pastry Timbale kunye neMacaroni
Iresiphi yemvelaphi yaseNtaliyane edibanisa i-puff pastry, ipasta kunye nezithako ezahlukeneyo. Izithako ezixutywe kunye nemacaroni zinokwahluka, kuxhomekeke kwingcinga okanye incasa nganye nganye.
I-Pizza yenyama eqholiweyo
Iresiphi elula yePizza kunye nenyama egalelwe iziqholo. Yeyona ndlela ilungileyo yokonwabela ipitsa, uyenza ukuba ibe yeyodwa ngendlela oyithandayo.
Iresiphi yomvundla onee-prawns, elula kwaye ekhawulezayo ukuyenza. I-prawn zitshisiwe ukuze zingcamle ngcono nge-cognac. Umvundla yinyama esempilweni ekufuneka ityiwe, ngenxa yamafutha ayo asezantsi, ukuba awupheki.
Iibhola zenyama zenziwe ekhaya
Iresiphi yenyama yenyama, ngoku inokudityaniswa nezinye izithako okanye ingcamle ngolu hlobo. Kulula ukuyenza kwaye inokwenziwa ngeentlobo ezahlukeneyo zenyama.
Iresiphi yekhekhe yetshokholethi.
Ngokuqinisekileyo sele uyayazi iresiphi yekhekhe yeyogathi. Ilula, ilula kwaye inomdla kakhulu. Ewe, ukuyenza into "eyahlukileyo", songeze ...
Iresiphi elula yokulungiselela i-crepes.
Iipancakes ezilula kakhulu ezisekwe kumgubo kunye namaqanda kunye nobisi oluvumela indibaniselwano eyiwaka enencasa kunye nenencasa ngokwe ...
I-Puff pastry kunye ne-cream millefeuille
Okwangoku, siphakamisa i-dessert emnandi kakhulu. Umgangatho wobunzima; Ixesha lokulungiselela elilula: imizuzu eli-15 + 30m yokupheka ...
Umvundla kunye nesosi yeSomesco
Iresiphi yomvundla kwi-romesco sauce, elula kwaye ekhawulezayo ukuyilungisa. Isosi inokwenziwa ekhaya okanye kuthengwe. Izithako ziyi-sauce kunye nomvundla.
Iiglasi zePuff pastry
Iresiphi elula yeiglasi okanye i-puff pastry palms. Isithako siyi-pastry ye-puff kwaye mhlawumbi ushukela omncinci. Unokongeza ezinye izinto ezifana netshokholethi ukuzigquma kwaye ubanike indawo eyahlukileyo.
Kukho iinguqulelo ezininzi zemvelaphi yepasta, enye yazo kukuba uMarco Polo xa ebuya kuhambo lwakhe ...
I-Turkey yafaka i-aubergines
Iresiphi elula onokuyiqhelanisa nokuthanda kwakho. Ezi aubergines zigcweleyo zamkela indibaniselwano eziliwaka, ndongeze kancinci ...
IArtichokes ngamakhowa kunye namaqanda ezigwityi
IArtichokes zikulungele ukukhathalela isibindi kunye nenyongo, inokupheka ngeendlela eziliwaka ezahlukeneyo. Ukusukela…